मृत्यु हुँदा मानिसले झैँ दुःख मनाउँछन् हात्ती, पहिलो पटक भयो यो नयाँ खुलासा | Ratopati
सन् २०१३ मा सञ्जिता पोखरेलले पहिलो पटक एसियाली हात्तीहरु मृृत्युमाथि विलाप गरिरहेको देखिन् । भारतको एउटा निकुञ्जमा अलि पाको उमेरको पोथी हात्तीको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो । एउटा जवान पोथी शवको वरिपरि घेरा लगाएर हिँडिरहेको थियो । ताजा गोबरको थुप्रोले अन्य हात्तीहरू पनि भर्खरै त्यहाँ आएका थिए भनी सङ्केत गर्दथे ।
स्मिथसोनियन संरक्षण जीवविज्ञान संस्थानका जीवविज्ञानी डा। पोखरेलले भनिन्, ‘त्यहीँबाट हामी जिज्ञासु भयौँ ।’ उनी र जापानको क्योटो विश्वविद्यालयका वन्यजन्तु जीवविज्ञानी नचिकेता शर्मा यसबारे थप जान्न उत्सुक भए किनभने यस्तो दृश्य निकै विरलै देख्न पाइन्छ किनभने हात्ती धेरैजसो घना जङ्गल वा घाँसे मैदानमा बस्छन् ।
रोयल सोसाइटी ओपन साइन्स जर्नलमा यी दुईको शोध बुधबार प्रकाशित भएको छ । यी दुईले संसारभरीका मानिससँग हात्तीले दुःख जताएको भिडियो युट्युबमार्फत् पठाउन अपिल गरे । त्यसपछि उनीहरुसँग थुप्रै भिडियो भए जसमा हात्तीका भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देख्न सकिन्थ्यो । हात्तीले शव छुन्थे । शवको चारैतिर चक्कर लगाउँथे । सुरक्षा दिन्थे । मरेको हात्ती उठ्छ कि भनेर लात हिर्काउँथे । मरेका हात्तीलाई बोक्नका लागि आफ्नो सुँड प्रयोग गर्दथे । यहाँसम्म कि हात्तीहरुलाई भिडियोमा कामिरहेको पनि देख्न सकिन्छ ।
छावा मर्दा पोथी हात्तीले उचालेर घुमाउँछन्
यदि छावा मर्छ भने उसकी आमा हात्तीले आफ्नो सुँडले उठाएर घुमाउने गर्छ । यस्तो प्रकारको शोधलाई कम्पेरेटिभ थानाटोलोजी भनिन्छ । यसमा भिन्न भिन्न जीवको मृत्युपछि उसको साथी जीवको के प्रतिक्रिया रहन्छ, त्यसबारे शोध, अनुसन्धान हुने गर्छ । डा. पोखरेलका अनुसार एशियाली हात्तीको त थुप्रै कहानी छ । संसारभरीका पत्रिकामा यिनिहरुको प्रतिक्रियाका कहानी प्रकाशित भएका छन् । तर कुनै वैज्ञानिक दस्तावेज भने थिएन ।
धेरैजसोले अनुहार र कानलाई छुन्छन्
युट्युबमा भेटिएका भिडियोमार्फत् यी दुई जीवविज्ञानीले हात्तीको मृत्यु हुँदा अन्य हात्तीको प्रतिक्रियाका २४ केस निकाले । यो शोधमा इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्सका रमन कुमार पनि समावेश भए । यी तीनजना मिलेर हात्तीले आफ्नो साथीको मृत्यु हुँदा सबैभन्दा सामान्य प्रतिक्रिया दिएको भनेको छुने र सुँघ्ने हो । हात्तीले साधारणतया मृत हात्तीको अनुहार र कान छुन्छन् र सुँघ्छन् ।
उठोस् भनेर शवलाई हल्लाइरहन्छन्
जवान हात्ती आफ्नो खुट्टाले शवलाई हल्लाउने कोसिस गर्छन् । तीनवटा घटनामा बच्चा मरेपछि पोथी हात्तीले खुट्टाले लगातार हानेर उठाउने प्रयास गरेको देखियो । कतिपटक त दिनभरी बच्चाको शवलाई उठाएर हिँड्छन् । यसो गरेर बच्चा जिवित होस् भन्ने पोथी हात्तीको चाहना हुन्छ ।
यद्यपि, अवलोकन पूर्णतया नयाँ भने थिएन । अन्वेषकहरूले बाँदर र बाँदरका आमाहरूले मृत शिशुहरूलाई बोकेको देखेका छन् । डल्फिन र ह्वेलहरूले मरेका बच्चालाई आफ्नो पिठ्यूँमा बोकेको पनि देखेका छन् वा तिनीहरूलाई सास फेर्न आग्रह गरेझैं पानीको सतहमा धकेलेको पनि देखेका छन् । स्कटल्याण्डको युनिभर्सिटी अफ स्टर्लिङ्गका हात्ती अनुसन्धानकर्ता फिलिस लीले उनले अफ्रिकी हात्तीकी आमाले आफ्नो मरेको छावालाई दिनभर बोकेको देखेको बताएकी थिइन् ।
डा. पोखरेलले एशियाली हात्ती जिवित हुँदा पनि छोएर आफ्नो समवेदना प्रकट गर्ने बताउँछिन् । यिनीहरु एक–अर्काको विपरित दिशामा सुत्छन् तर यिनीहरुको सुँडले एक–अर्कालाई छोइरहेको हुन्छ । कतिपटक सुँडलाई एक–आपसमा बाँध्ने पनि गर्छन् ।
दोस्रो सबैभन्दा ठूलो प्रतिक्रिया चिच्याउन, कोलाहल मच्चाउनु हो । हात्तीको समूहले मरेको हात्तीको चारैतिर एउटा सुरक्षा घेरा बनाउँछन् । नजिक बस्छन् र बेस्सरी चिच्याउन सुरु गर्छन् । यदि कोही मानिस वा अन्य जनावर यसबीचमा आउँछन् भने तिनीहरुको खैरियत छैन । त्यसको पिछा गर्छन् । केहीले मृत हात्तीलाई उठाएर सार्ने पनि प्रयास गर्छन् । शवलाई कुनै जनावरमा व्यक्तिले केही गलत नगरुन् भनेर तिनीहरु यस्तो गर्छन् ।